Tun Tun's Photo Diary: 2016
at 9/26/2016 08:35:00 PM Links to this post 1 comment:
2013-Dec-15 မနက်။ ကျောက်မြောင်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မုန်.ဟင်းခါး နဲ. အုန်းနို.ခေါက်ဆွဲသောက်ပြီး။ ရွေတိဂုံ ဘုရားကို Taxi နဲ. သွားခဲ့တယ်။ ရွေတိဂုံ ဘုရားကိုတော့ ရန်ကုန်ရောက်တိုင်း သွားဖြစ်တယ်။
at 9/12/2016 09:29:00 PM Links to this post No comments:
at 9/10/2016 10:35:00 PM Links to this post No comments:
at 9/06/2016 11:53:00 PM Links to this post No comments:
2013-Oct-15, Flower Dome ထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရဲ. နောက်ဆုံးပို.စ်ပါ။ ပုံတွေပဲတင်လိုက်ပါတယ်။ စာဖက်တဲ့သူ သိပ်မရှိတော့ စာတွေ အရှည်ကြီး မရေးချင်တော့ဘူး။း)
at 7/28/2016 09:29:00 PM Links to this post 1 comment:
2013-Oct-15, Garden By the By ရဲ. Flower Dome ထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ဆက်ပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။ ပုံတွေများလို. Part3ဆက်ရန်ရှိပါသေးတယ်။ စာတွေ အရှည်ကြီးရေးမနေတော့ဘူး။ ပုံတွေ ပဲတင်လိုက်ပါတယ်။
at 7/26/2016 10:01:00 PM Links to this post No comments:
at 7/09/2016 10:16:00 AM Links to this post No comments: